Jabra Elite 45h, mpiara-miasa tonga lafatra amin'ny fifandraisan-davitra [REVIEW] | Vaovao momba ny gadget
Jabra Elite 45h, mpiara-miasa tonga lafatra amin'ny fifandraisan-davitra [REVIEW]
Miguel Hernandez | 01/05/2021 12:00 | Nohavaozina amin'ny 29/04/2021 13:16 | General, hevitra
Telework Eto izy hijanona ary manitsaka ny fomba fahitantsika zavatra, hany ka maro amintsika no nisafidy ny hanangana birao kely ao an-tranontsika ary tsapantsika fa manan-danja tokoa ireo gadget amin'ny andavanandrontsika.
Jabra Izy dia manam-pahaizana manokana amin'ny famoahana vokatra famoahana feo sy horonantsary ho an'ny karazana mpampiasa rehetra ary amin'ity indray mitoraka ity dia hifantoka amin'ny vokatra somary marobe izy. nyIzahay dia mijery lalina ny saon-doha Jabra Elite 45h mihoatra ny sofina, mety indrindra amin'ny fifandraisan-davitra miaraka amin'ny traikefa lafo vidy. jereo miaraka aminay izy ireo.
3 Fifandraisana sy fizakan-tena
Araka ny fantatrao, i Jabra dia orinasa iray mampiasa ny famokarana vokatra manana fari-pahaizana avo lenta avo lenta, tsy mitovy amin'ny zavatra hitantsika amin'ireto Jabra 45h. Mikasika ny fonosana, ny orinasa dia miloka amin'ny minimalism foana sy ny rafitra unboxing indostrialy izay milaza amintsika na inona na inona. Ny zavatra voalohany manaitra antsika rehefa manala azy ireo ao anaty boaty dia ny fahazavan'izy ireo tafahoatra sy ny fahatsapany ny fananganana azy ireo, ireo toetra ireo dia miaraka amin'izy ireo mandritra ny fampiasana isan'andro. Rafitra fanitsiana milimetatra tsara tsy misy miketrika sy miaraka aminy sofina be loatra amin'ny sofina izay tsy dia manenjana.
Dimensions: 186 * 157 * 60,5 mm
Loko azo: Black, Black + Copper, Beige, Blue, Brown, Black + Space Grey
Izy io dia misy ifandraisany betsaka amin'ny hoe ny headset dia vita amin'ny hoditra sentetika sy ny padding dia fahatsiarovana foam, miaraka amin'ny «L» sy «R» izay nanondro azy ireo mivantana. Manana lanjany 160 grama fotsiny isika, zavatra mahagaga, miaraka amin'ny refy voafetra. Mazava ho azy, mitondra ilay boaty tariby USB-C izay hampiasaina handefasana ny fitaovana ary zara raha 30 santimetatra ny halavany, izay nahatonga anay fahatsapana mangidy mangidy raha jerena fa ny headphones mihitsy dia efa ho 20 santimetatra ny halavany.
Mandeha mivantana amin'ny mpandahateny tsirairay izahay, samy manana ny savaivony 40 milimetatra ny ankavanana sy ny ankavia. izay tsy ratsy mihintsy. Samy manana firakofana manohitra ny tabon'ny rivotra izay hanampy antsika hiresaka sy hihaino mozika tsara na dia any ivelany aza, zavatra izay nohamarininay fa mandeha tsara. Toy izany koa no mitranga amin'ny tabataba amin'ny antso, manana microphone roa miandraikitra hanatsarana ny fahombiazan'ny feontsika ary amin'izany dia ataovy izay hahazoana antoka fa ny mpandray dia mandre tsara izay rehetra tiantsika avoaka.
Fantson'ny mpandahateny mozika: 20 Hz ka hatramin'ny 20 kHz
Fantson'ny mpandahateny miresaka: 100 Hz ka hatramin'ny 8000 Hz
Mikraoba MEMS roa
Bluetooth miaraka amina tsiroaroa roa miaraka
Mahagaga, ary tsy toy ny marika hafa, ny orinasa dia miantoka fa ilay fitaovana manana antoka roa taona manoloana ny rano sy ny vovoka ao amin'ny tranonkalany, zavatra nanaitra ahy fatratra. Amin'ity fizarana ity dia kely no azo takiana ara-teknika amin'ny Jabra 45h izay miorina amin'ny fitaovana fanoherana avo lenta toy ny alimo vita amin'ny aliminioma sy silônaly misy menaka tsy miraikitra. Ny zava-misy dia ny fampiasana isan'andro no ankasitrahana amin'ny fanoherana fanampiny omena an'izany rehetra izany.
Fifandraisana sy fizakan-tena
Mifototra amin'ny ny fifandraisana Bluetooth 5.0 amin'ity tranga ity, miaraka amin'ny fanamarinana ilaina rehetra amin'izany. Zava-dehibe ny mombamomba ny Bluetooth rehefa mihaino mozika ary Eto isika dia mahita fa tsy tonga eo amin'ny codec apt Qualcomm, Na izany aza, manana ny mahazatra izahay avy amin'ny Apple sy ny sisa amin'ireo orinasa: HSP v1.2, HFP v1.7, A2DP v1.3, AVRCP v1.6, PBAP v1.1, SPP v1.2.
Bokotra natokana hiantsoana an'i Alexa, Siri, Bixby na Google Assistant.
Ho an'ny fizakantena, Tsy manana ny angon-drakitra teknika amin'ny haavon'ny haavon'ny batterie amin'ny MAA izahay. Mandritra izany fotoana izany, mampanantena mozika hatramin'ny 50 ora ny orinasa, zavatra iray izay azonay hamarinina fa manakaiky ny tena zava-bitan'ny headphones. Marihina fa ny seranan-tsambo USB-C dia manana karazana "fast charge" izay ahafahantsika mizaka tena 10 ora miaraka amin'ny famahanana 15 minitra, na dia eo aza ny fiheverana fa ny fotoana iampangana manontolo miaraka amin'ny adapter USB-C 5W dia 1 ora sy 30 minitra, dia toa ny fiampangana mahazatra ihany. Manana "mode de tory" izy ireo izay hoentina mandeha ho azy hanatsara ny fahombiazan'ny bateria rehefa tsy ampiasainay izy ireo ary ny fanidiana ho azy aorian'ny 24 ora tsy ampiasana.
Toy ny mahazatra amin'ny vokatra Shure, mahita headset somary mifanaraka tsara isika. Ny bas dia tsy misongadina loatra ary afaka manavaka ny karazan-tononkira rehetra isika, eny, tsara ny manamarika fa tsy afaka mangataka mihoatra noho ny headphones hafa isika amin'ny vidiny. Raha ny tena izy, ny fahafahan'ny fanafoanana ny tabataba amin'ny kabary dia somary mahagaga ihany raha jerena fa "be sofina" izy ireo ary tsy manidy ny sofintsika tanteraka.
Ny mikrô dia miasa tsara amin'ny resaka lava, ankoatr'izay, manoka-peo izy ireo any ivelany izay afaka manelingelina na manelingelina ny antso an-tariby. Ireo headphones ireo dia manana lanjany maivana sy fahaleovan-tena feno habibiana izay mitarika antsika haingana hieritreritra fa mety ho safidy tsara izy ireo rehefa miresaka momba ny fifandraisan-davitra. na mandany ora maro any amin'ny birao tsy misy tahotra handray antso. Izy ireo dia tsy miteraka havizanana na amin'ny sofina na amin'ny loha noho ny lanjany ary ny fitaovany tsy miandany ary mahatohitra, zavatra heveriko fa tokony hasongadiko amin'ity fanadihadiana ity.
Araka ny efa nolazainay teo aloha, raha te handositra telefaona TWS ianao rehefa mandefa telefaona na mandany andro fiasana tsara nefa tsy mahafoy antso an-tariby, ireo Jabra Elite 45h ireo dia tolotra tena mahaliana amin'ny vidin'ny fifaninanana. Azonao atao ny mividy azy ireo latsaky ny 99 euro amin'ny toeram-pivarotana mahazatra toa an'i Amazon. Tsy haiko ny tsy hitadidy fa tsy manana isika aptX ary mety malahelo azy ireo isika, ary koa noho ny antony tsy fantatro tsara fa nanapa-kevitra ny hanao tsy misy seranan-tsambo Jack 3,5mm ho an'ny fifandraisana nentim-paharazana izy ireo.
Navoaka tamin'ny: May 1 amin'ny 2021
Fanovana farany: 29 Aprily 2021
Volavola mahatohitra sy tena ahazoana aina
Feo tsara mifanaraka tsara
Vidiny somary tery
Tsy misy aptX
Bokotra misy fikirakirana sarotra
Tariby USB-C 30cm
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Jabra Elite 45h, mpiara-miasa tonga lafatra amin'ny fifandraisan-davitra [REVIEW]
Fresh´n Rebel Duo Base, famolavolana sy fahaiza-manao amin'ny famahanana tsy misy tariby